Date: 16 avril 2018 - 07:57
Mety otrin eo azfd ny 39' HD @ le CHANGHONG?
Date: 16 avril 2018 - 09:44
Ilay TV ecran plat changhong amin'izao fotoana zao ve zany resahanareo zany ?
Date: 16 avril 2018 - 09:57
f raha taloha dia ohatrinona , d zao mety otrinona?
Date: 16 avril 2018 - 14:49
Raha led no lazaina ny qualiten'ny sary aloha tsy mitovy @ ireny philips na sony na samsung d'origine ireny fa ny hamafisany kosa milamina tsara ihany.
Date: 20 avril 2018 - 07:13
Ary raha ireny samsung sy sony sous licence sa copie no filaza azy ireny no ampitahana amin'ny changhong dia mbola tsara ve le sony sns ?
Date: 23 avril 2018 - 10:34
salut daholo mety ampiasaina amin ny tv ecran plat changhong ve reny tvcommand universel reny e